Warbixin & Sawiro Safaro Raiisul wasaarihii DKMG aheyd Dr Gaas uu kumarayo Australia – SBC
Warbixin & Sawiro Safaro Raiisul wasaarihii DKMG aheyd Dr Gaas uu kumarayo Australia
Posted by Webmaster on May 30, 2013 Comments
Xaflado kala duwan oo lagu soo dhaweynayay Ra’isal-wasaarihii hore ee soomaaliya Prof Cabdiweli Max’ed Cali GAAS ayaa lagu qabtay magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Prof C/weli oo soo gaaray waddankan Australia maalintii isniinta ee aynu ka soo gudubnay ayaa socdaalkiisu waxa uu ka mid ahaa socdaalo & marti-qaadyo kala duwan oo uu daafaha caalamka ku marayay maalmihii & bilihii ugu dambeeyay, gaar ahaan waddamada reer galbeedka ee Soomaalidu u soo hayaantay. Socdaalka Dr C/weli ee Australia ayaa sidoo kale jawaab u aheyd ballanqaad uu hore u sheegay in uu soo booqan doono jaaliyadda Soomaalida ee Australia xilligii uu raisalwasaaraha ka ahaa waddanka Soomaaliya.
Dadweyne aad u faro badan ayaa ka qeyb qaatay soo dhaweynta Raisalwasaarihii hore ee Soomaaliya, kuwaas oo isugu jiray madax dowladihii soomaaliya soo maray ka mid ahaa, masuuliyiinta jaaliyadda Soomaalida Australia, haweenka, caruurta, dhaliyarada iyo marti kale, kuwaas oo aan ka xumahay in aan magacyadooda halkan ku soo tixi Karin tirada oo badan awgeed.
Xaflad ballaaran oo soo dhaweyn ah oo habeenkii xalay lagu qabtay hotelka Rydges, soona qabanqaabiyeen Jaaliyadda Soomaalida Australia, ayaa waxaa hoolkii buuxdhaafiyay dadweyne aad u tiro badan, iyadoo meelaha dadka soomaalida uga soo baqooleen soo dhaweynta Prof C/weli ay kamid aheyd waddanka Newzealand.
Prof C/weli oo ah aqoonyahan soomaaliyeed ayaa khudbad aan hore looga baran madaxda soomaalida ka jeediyay xafladdii xalay. Khudbaddaas oo uu kaga hadlay ahmiyadda aqooontu u leedahay bani’aadamka & sida qurbajoogta soomaaliyeed ee wax bartay gacan uga geysan karaan waddankoodii hooyo. Waxaana uu dadkii halkaa joogay ku booriyay in ay wax bartaan dalkoodiina u laabtaan una adeegaan.
Xafladdii labaad ee R/wasaarihii hore ee soomaaliya mudane GAAS loogu qabtay magaalada Melbourne ayaa ka dhacday jaamacadda caanka ah ee Melbourne University oo ku taalla bartamaha magaalada. Xafladdan waxay tii xalay kaga duwaneyd iyadoo ay ka soo qeyb galeen aqoonyahano kala duwan oo Jaamacaha waddankan wax ka dhiga, hey’ado caalami ah iyo shakhsiyaad kale kuwaas oo daneynayay arrimaha waddanka Soomaaliya.
Khudbaddii uu Prof C/weli ka jeediyay jaamacadda Melbourne ayuu ku jeediyay luqadda ingiriisiga, iyadoo dadkii faraha badnaa ee kasoo qeyb galay aad ula dhaceen.
Jaaliyadda Soomaalida ee Austalia & Newzealand ayaa uga mahadceliyay booqashada sharafta leh ee Prof C/weli uu ugu yimid, waxaana booqashadani noqoneysaa tii ugu horreysay oo mas’uul Soomaaliyeed oo darajadaas gaara uu dhulkan fog ku yimaado.
Isku soo wada duub, booqashada R/wasaarihii hore ee Soomaaliya Prof C/weli Max’ed Cali GAAS ee Australia waxaa jaaliyadda soomaalida ka sokoow gacan weyn ka geystay qunsuliyadda Soomaaliya ee Australia, iyadoo tani tahay markii ugu horreysay taatiikhda Soomaaliya waddankan Australia laga hirgeliyo Qunsuliyad Soomaaliyeed. Arrinta muhiimka ahna waxay tahay qunsuliyaddan waxay ka mid aheyd mirihii waxqabadkii dowladdii badbaado qaran ee Prof C/weli madaxda ka ahaa.
Ugu dambeyn Dr GAAS wuxuu u mahadceliyay intii ka qeyb qaadatay soo dhaweyntiisa, waxaana safarka xiga ku tagi doonaa magaalada caanka ah ee Sydney ee isla waddankan Australia.
Waxaan idiin soo gudbin doonnaa haddii alle idmo sawiradii booqashada Dr C/weli ee Australia oo dhameystiran.